Faahfaahinta casiir leh ee astaamaha taxanaha Galaxy S11 ayaa muuqda | Androidsis
Faahfaahinta casiir leh ee taxanaha taxanaha Samsung ee Galaxy S11 ayaa muuqda
Haaruun Rivas | | Noticias, Samsung
Weli way muuqataa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taxanaha Samsung Galaxy S11 ka hor inta aan lagu dhawaaqin wax ku saabsan iyaga si rasmi ah. Horumarkii ugu dambeeyay waxaan diiwaangelinnay suurtagalnimada in shaashadda lagu fulin lahaa waa 120 Hz. Hadda waxaan helnay xog dheeri ah.
Maxaa cusub ee ku saabsan aaladaha ka samaysan taxanaha waxay ku xiran tahay taariikhdooda sii deynta saxda ah, shaashada ay yeelan doonaan iyo in ka badan. Waxaan ku ballaarin doonnaa tan oo dhan xagga hoose.
Sida ku cad daabacaadda Jarmalka ee Nolosha Matrix, Samsung waxay qaban doontaa munaasabad daah fur ah Febraayo 11 si ay u shaaciso safka Galaxy S11. Telefoonada taxanaha ah ee S-ga ayaa suuqyada garaaci doona toddobaadyo kadib, waana bisha Maarso. Warbixinta ayaa sheegtay in S Line-ka ay ku jiri doonaan taleefannada Galaxy S11e, Galaxy S11, iyo Galaxy S11 Plus.
Galaxy S11e ayaa noqon doonta qaabka kaliya ee aan laheyn shaashadda 120 Hz, isagoo ah kan ugu caansan taxanaha. Galaxy S11 iyo S11 Plus waxay, dabcan, yeelan doonaan 120 Hz soo bandhigida heerka. Sidii hore aan u soo sheegnay, waxaa jiri doona seddex ikhtiyaar bandhigyadaan: mid ka mid ah kuwan wuxuu shaashadda ku hayaa 60 Hz, mid kalena wuxuu had iyo jeer ku hayaa 120 Hz, iyo xulashada ugu dambeysa waxay daartaa howlaha 120 Hz oo si otomaatig ah uga badali kara 60 Hz iyo taa lidkeed. Si loo ballaadhiyo waxa la sheegay, ninka caanka ah ee Evan Blass ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in saddexda taleefan ee taxanaha S11, siday u kala horreeyaan, ay yeelan doonaan cabbirrada shaashadda oo ah 6.4 inji (ama 6.2 inji), 6.7 inji iyo 6.9 inji.
Daabacaadda ayaa sii shaacisay taas Taxanaha S11 waxaa laga heli doonaa noocyada kala duwan ee Snapdragon iyo Exynos CPU ee suuqyada kala duwan, sidii shirkadu horay noo caadaystay. Yurub waxay heli doontaa taxanaha S11 oo leh Exynos 990 chipset oo leh 5G taageero. S11 wuxuu imaan doonaa daabacadaha SIM iyo eSIM, halka S11 Plus uu yeelan doono taageero ku xirnaanta 5G. Taa baddalkeeda, taxanaha S11 wuxuu la imaan karaa 25-watt tikniyoolajiyad degdeg ah.
Kaamirada Samsung Galaxy S11 ayaa ka sareysa kana sareysa
Galaxy S11 iyo Galaxy S11 Plus ayaa la filayaa inay ku soo baxaan kamarado afar geesood ah. Macluumaadkani wuxuu ka hor imaanayaa ereyada qaarkood oo u muuqda inay muujinayaan shan kamaradood oo ku yaal dhinaca dambe ee S11. Nolosha Matrix ayaa sheegtay in dejintu ay ku jiri doonaan lens-ka aasaasiga ah 108-megapixel, lens-ka telephoto-ka 48-megapixel oo leh 10x zoom aan khasaaro lahayn, iyo 100x hybrid zoom support. Codsi patent dhowaan laga helay Samsung wuxuu soo jeedinayaa in taxanaha S11 laga yaabo inuu soo bandhigo OIS-karti u leh 5x waxqabadka indhaha.
S11 iyo S11 + sidoo kale waxay taageeri doonaan duubista 8K video ee 30fps. Telefoonnadan ayaa sidoo kale yeelan doona adeegsadayaal leh muuqaalka muuqaalka kamaradaha badan ee u oggolaanaya iyaga inay ku eegaan fiidiyowga la qabtay iyada oo loo marayo afarta muraayadaha indhaha oo u oggolaanaya isticmaalaha inuu doorto midka la doonayo. Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay, tikniyoolajiyada horudhaca kamaradaha badan ayaa laga yaabaa in loo heli karo iyada oo ah "Muuqaalka Agaasimaha".
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Faahfaahinta casiir leh ee taxanaha taxanaha Samsung ee Galaxy S11 ayaa muuqda
DxOMark wuxuu qiimeeyaa kamaradda sawir-qaadaha ee 'Sony Xperia 5' mid celcelis ahaan tayo leh
Gabi ahaanba galactic caajis taas oo lagu hagaajinayo madfacyada laguna baabi'inayo maraakiibta cadowga ee loo yaqaan 'Galaxy Missile War'